Mogadishu Journal » Xanta ayaa haysa: Mbappe si uu u xaqiijiyo go’aankiisa Axadda
Sax-tock, sax-tock. Waxay u muuqataa in wakhtigu uu ugu dambeyntii dhamaan doono Axadda, waxaana Kylian Mbappe uu ugu dambeyntii dhammaan doonaa.
Paris Saint-Germain ayaa xilli ciyaareedkan la kulantay dhirbaaxo kale oo cajiib ah iyada oo mar kale si naxariis darro ah looga reebay tartanka champions League waxana ay Real Madrid ku sugaysaa garbaha.
Wararka ayaa sheegaya in 23-sano jirkaan uu ugu dambeyntii ku dhawaaqi doono go’aankiisa Axadda maanta ah.
Sheekada ugu sareysa - MBAPPE si loo xaqiijiyo GO'aanka Axadda
Kylian Mbappe ayaa ku dhawaaqi doona inuu u ciyaari doono Paris Saint-Germain ama Real Madrid Axada, sida laga soo xigtay L’Equipe.
Parisian-ka waligiis ma qarin jaceylka uu u qabo LeBron James wuxuuna u muuqdaa inuu ku ekaan doono ku dhawaaqistiisa 'Go'aanka' laga soo bilaabo 2010.
Waxa hubaal ah sida ay wararku sheegayaan, Mbappe waxa uu damacsan yahay in uu ku dhawaaqo go’aanka ka hor inta aanay xulka qaranka France ku kulmin xerada Clairefontaine May 28.
Iyadoo dhawaan la sheegay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid ayaa u muuqda mid aad u macquul ah, wadahadalada ayaa wali socda sida laga soo xigtay warbixinta L’Equipe, iyadoo PSG ay dooneyso inay ka takhalusto u dhaqaaqista suurtagalka ah daqiiqadaha ugu dambeeya.
Dhanka kale, saaxiibkiis xulka France iyo khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa heshiis shaqsi ah la gaaray Manchester City, sida laga soo xigtay Times, laakiin wuxuu ka laabtay cabsi uu ka qabo falcelinta taageerayaasha, wuxuuna hadda u muuqdaa inuu u guuri doono dibadda.
-Pogba, Juventus ayaa sidoo kale rajeyneysa inay sii xoojiso khadkeeda dhexe oo ay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho, Gazzetta dello Sport ayaa werisay.
Diario AS ayaa ku warameysa in Paulo Dybala uu meesha ka saaray inuu u dhaqaaqi doono Tottenham marka uu qandaraaskiisa Juve dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkan.
- Kalidou Koulibaly ayaa u soo baxay bartilmaameedka Barcelona, ​​kaasoo doonaya inuu ku daro Miralem Pjanic qayb ka mid ah heshiiska xirmada ee Napoli, sida laga soo xigtay Fichajes.